सन्दिपको आइपिएल डेब्यू-प्रभावशाली प्रदर्शन – आफ्नो प्रेरक संसार
सन्दिपको आइपिएल डेब्यू-प्रभावशाली प्रदर्शन
Bibas chetan — २९ बैशाख २०७५, शनिबार २२:२३2comments
नेपाली स्पिनर सन्दीप लामिछानेले ‘डेब्यू’मा प्रभावशाली प्रदर्शन गरेपनि दिल्ली डेयरडेभिल्सले इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) मा शनिबार जित निकाल्न सकेन । दिल्ली विराट कोहलीको कप्तानीमा रहेको रोयल च्यालेन्जर्ससँग ५ विकेटले पराजित भएको छ ।
सन्दिप लामिछानेले अाईपिएल डेब्यु बलिङमा प्रभाबशाली बलिङ गरेका छन । उनले ४ ओभरमा २५ रन दिएर एक विकेट लिए । दिल्लीको फिरोज शाह कोटला मैदानमा रोयल च्यालेन्जर्स बैंलोरविरूद्ध बलिङ गरेका लामिछानेले सबैभन्दा कम इकोनोमी ओभर बलिङ गरेका हुन्।
सन्दीपले पार्थिव पटेलको विकेट लिँदै‌ ऐतिहासिक सफलता हात पारेका हुन्। दोस्रो ओभरको चौथो बलमा उनले पार्थिवलाई एलबिडब्लुको धरापमा पारे। यसअघि उनले विराट कोहलीलार्इ सुरूवाती दुर्इ बल गरेका थिए। पहिलो बल विराटले डट खेलेका थिए। दोस्रो बलमा विराटले एक रन लिए। तेस्रो बलमा पार्थिवले चौका प्रहार गरे भने चौथो बलमा सन्दीपले उनलार्इ एलबिडब्लु आउट गरे। पाँचौ र छैठौ बल लगातार डट फालेका थिए।
नेपालबाट पहिलोपटक आइपीएल खेलिरहेका १८ वर्षे सन्दीपले यसअघि पहिलो ओभर बलिङमा ६ रन खर्चिएका थिए।
पहिलो ४ बलमा २ रन मात्रै दिएका सन्दीपको पाँचौं बलमा बैग्लोरले बाइ मार्फत ४ रन बटुलेको थियो। छैठौं बल पनि सन्दिपले डट फालेका थिए।
आफ्नो तेस्रो ओभरमा सन्दीपले ९ रन मात्रै खर्चिए। विराट कोहलीले उनको तेस्रो ओभरको पहिलो बलमा चौका प्रहार गरेका थिए।
दोस्रो बलमा विराटले कुनै रन लिन सकेनन् भने तेस्रो बलमा एक रन लिँदै एबी डिभिलियर्सलार्इ स्ट्राइकमा ल्याए। चौथो बलमा डिभिलियर्स, पाँचौं बलमा कोहली र अन्तिम बलमा डिभिलियर्सले एक(एक रन मात्रै लिन सके।
यस्तै आफ्नो चौथो ओभरमा लामिछानेले एक छक्कासहित १० रन खर्चिए।
पहिलो बलमा डिभिलियर्सले एक रन लिए भने दोस्रो बलमा कोहलीले पनि एक रन मात्र लिन सके। तेस्रो बलमा डिभिलियर्सले फेरि एक रन लिए भने चौथो बलमा पनि कोहलीले एक रन लिएर स्टाइक परिवर्तन गरे। पाँचौ बलमा पहिलो छक्का दिएका लामिछानेले छैठै बलमा डिभिलियर्सले कुनै रन लिन सकेनन्।
a blog that?s both educative and engaging, and withoutadoubt, you’ve hit the nail on the head.
something regarding this. http://comfortzonegambia.com/node/11?page=1488
Wⲟrkinmg asafreelznce ρaralegal haas components іn its faѵoг, and components hich might be
negative to some peoplе. Ifasensе оf journey and excitement in youг work liife iis what ѡouⅼd swqimsᥙit you the
most effective, freelancing could beaterrific cһoice foor y᧐u!